खुला अर्थतन्त्रमा नियन्त्रित शैक्षिक संस्था किन ? - Karobar National Economic Daily
खुला अर्थतन्त्रमा नियन्त्रित शैक्षिक संस्था किन ?
query_builderAugust 17, 2017 12:00 PM supervisor_account जगदीश दाहाल visibility220
उदारीकरण र खुला अर्थतन्त्र संसारका प्रायःजसो मुलुकले अपनाएका छन् । यातायात, सञ्चार र विभिन्न प्रविधिको विकासले संसार साँघुरो भइसकेको छ । अब कोही कसैसँग टाढा छैन ।
जसरी सञ्चार क्षेत्र एउटा उद्योगका रूपमा विकसित भएर आयो त्यसै गरी शिक्षा क्षेत्र पनि उद्योग–व्यवसायका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । तर, यसमा राज्यले ठोस नीति लिन र सही दिशा पहिल्याउन नसकेको मान्नुपर्छ । साँच्चै भन्ने हो भने नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी अस्थिरता शैक्षिक क्षेत्रमै देखियो । शिक्षाक्षेत्रमा अनेकौं विकृति–विसंगति मौलाउँदै गइरहेको पृष्ठभूमिमा डा. गोविन्द केसी सुरुमा सबैको चासो र आस्थाका पुञ्ज बनेर देखा परे, भारतका अन्ना हजारेजस्तै ।
नेपालमा पनि अन्ना हजारे रहेछन् भन्ने एउटा सन्देश जनमानसमा प्रवाह भयो । उनी विभिन्न माग राखेर पटक–पटक अनशन बस्दै अहिले एघारौं पटकसम्म आइपुग्दा उनका माग र उनको नियतमा यो पङ्क्तिकार शंका गर्दैन, तर जुन तŒवहरू उनको समर्थनमा देखिए, तिनीहरूको नियतचाहिँ वास्तवमा यही हो भनेर किटान गर्न सकिने अवस्था छैन । फरक–फरक उद्देश्य र नियतले तिनीहरू समर्थनमा उत्रिएका हुन सक्छन् । समस्यालाई अझ बढी चर्काएर आफ्ना नीहित स्वार्थ पूरा गर्ने र कसैका विरुद्ध इबी साँध्ने उद्देश्यले पनि लागेका हुन सक्छन् ।
जुन किसिमले डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा नाराजुलुस देखिए, त्यसले शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो विकृति, विसंगति एवं अस्थिरता निम्त्याई मुलुकलाई शैक्षिक गन्तव्यहीन बनाउन लाग्यो कि भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । डा. गोविन्द केसी धेरै पटक अनशन बसिसके र राज्यसँग केही सम्झौता भएर अनशन टुङ्ग्याएको समाचारहरू बाहिर आए ।
तर, यस पटक भने उनले सम्झौता नगरी अनशन स्थगित गरे । यद्यपि उनका धेरै मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन पारित गरिने चर्चा चलेको छ । विगतमा पटक–पटक सम्झौता भए पनि त्यसको पालना नहुँदा अनशन बस्नुपरेको भन्ने गोविन्द केसीको भनाइ रहने गरेको पाइन्छ । वास्तवमा सम्झौताको पालना दुवै पक्षबाट हुनुपर्छ । सम्झौताको पालना गोविन्द केसीको पक्षबाट कति भएको छ र राज्यपक्षबाट कति भएको छ भनेर सबैभन्दा पहिला त्यसको ठोस आँकडा जनसमक्ष ल्याउन जरुरी छ । यसबारे सर्वसाधारणमा केही जानकारी आएको छैन ।
मागमाथि माग थपिएको पनि देखिन्छ । कुनै पदाधिकारी विशेषको राजीनामा नै उपचार हो कि भन्ने हिसाबले माग राखेको पनि देखियो । के त्यतिले नै हुने हो त ? त्यसबाट समस्याको समाधान पुग्छ ? अर्कातर्फ राज्यले गोविन्द केसीसँग एउटा सम्झौता गरेर अनशन तोडाउँछ तर त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्दैन । के यी माग गोविन्द केसीका व्यक्तिगत कुरा हुन् ? उनले राखेका माग सम्बोधन गरिन आवश्यक छैन ?
छैन भने किन छैन भनेर जनसमक्ष प्रस्ट पारिनु पर्दैन ? माग राख्ने र माग पूरा गर्ने दुवै पक्षबीचमा जे–जस्ता सम्झौता हुन्छन् ती बाहिर आउनु जरुरी छ । अहिलेसम्म के–कस्ता सम्झौता भए र ती के–कति कार्यान्वयन भए भनेर पनि जनतामाझ ल्याउनु जरुरी छ । तबमात्रै आमनेपाली जनताले डा. गोविन्द केसीको पटक–पटकको अनशन जायज वा नाजायज भनेर बुझ्न सक्छन् । नत्र सर्वसाधारणलाई गुमराहमा राखेर अनेक थरी माफियाको स्वार्थ सिद्धिका लागि नै यो अनशनको श्रृंखला चलिरहेको छ कि भनेर बुझ्न र ग्रहण गर्न आमनेपाली जनता बाध्य हुन सक्छन् ।
वास्तवमा, मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा के–कस्ता स्रोतका पैसा प्रयोग भए, कुन स्रोतबाट मेडिकल कलेजहरू खुलेका छन्, कुन नियतले खोलिएका छन् आदि कुराबारे जनचासो उत्पन्न हुनु र सरोबारवालाहरूले खोजीनिती गर्नु स्वाभाविक हो । किनभने सबैले सबैलाई हेर्ने दृष्टिकोण एकै हुनु पनि जायज होइन । त्यसैले मेडिकल शिक्षामा भएका लगानी छुट्ट्याउन र केलाउन आवश्यक भइसकेको छ ।
तर, यति हुँदाहुँदै पनि विचार गर्नैपर्ने कुरा के छ भने अहिलेको नेपाली समाजमा पैसाका लागि मान्छेले जेसुकै कुकर्म गर्न पछि नपर्ने गरेको देखिन्छ । मानव तस्करी हुन्छ, मानव अंगको तस्करी हुन्छ, चेलीबेटी बेचबिखन हुन्छन् । कानुन, नैतिकता केही कुराको डर नराखी केवल पैसाको पछि दगुर्ने चिन्तनका मान्छेहरू समाजमा बढ्दै गएकाले कुन व्यवसायमा कस्ता मान्छे लागेका छन् र कसरी काम गरिरहेका छन् भनेर सूक्ष्म अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।
एउटा व्यवसायमा बदनाम भएको मान्छेले अर्को व्यवसायमा असल र राम्रो काम गर्ला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? कोही व्यक्ति एउटा काममा बदमासी गरेर दण्डित भएको छ भने उसलाई अर्को काममा प्रतिबन्ध लगाउने कि नलगाउने ? त्यस्ता मान्छेको स्वामित्वमा खुलेका मेडिकल कलेजमाथि शंका गर्ने कि नगर्ने ? मेडिकल कलेजमा एउटा विद्यार्थीले डिग्री हासिल गर्दासम्म कति खर्च गर्नु÷गराइनुपर्छ भन्ने कुरामा राज्यको मापदण्ड के ?
मेडिकल कलेज सबै क्षेत्रमा पु-याइनुपर्छ, गुणस्तरीय डाक्टरहरू सबै क्षेत्र र जातजातिको पहुँचमा हुनुपर्छ । तर, यो कुरामा राज्य कति संवेदनशील छ त ? मेडिकल शिक्षाको सम्बन्धमा अध्ययन र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न विगतमा केदारभक्त माथेमा आयोग बन्यो । तर, माथेमा आयोगको प्रतिवेदन निर्विवाद रहेन । उसको प्रतिवेदनबारे बजारमा अनेकखाले टीका–टिप्पणी भए ।
मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू त्यसको विरोधमा उत्रिए । कतिपय त त्यो प्रतिवेदनलाई ‘बौद्धिक दिवालियापन र पागलपनको उपज हो’ भन्नसम्म पछि परेनन् । सोही प्रतिवेदनको सन्दर्भमा यो बीएन्डसी कलेजका दुर्गा प्रसाईंलगायतको टिभी अन्तर्वार्ता आयो । उनीहरू धेरैजसोले उक्त प्रतिवेदनलाई मेडिकल शिक्षाविरोधी र मुलुकविरोधीको संज्ञा दिँदै एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरूको आडमा विदेशी शैक्षिक संस्थाहरूलाई मद्दत पु¥याउने खालको भयो भनी प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
त्यस्तै, उक्त विचारको स्वागतमा कतिपय एजुकेसन कन्सल्टेन्सी पनि उत्रिए । ती कन्सल्टेन्सीवालाहरू ‘नेपालका मेडिकल कलेजहरू गुणस्तरीय शिक्षा दिन असक्षम छन्, पैसा असुल्ने काम मात्र गर्छन्’ भन्नेमा देखिए । मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू र एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकहरूबीच अनेक आरोप–प्रत्यारोप सुनिए ।
यसका बाबजुद समस्याको दिगो निकास भने निस्कन सकिरहेको छैन । मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र दिनानुदिन मुनाफाखोरी व्यापारीको चंगुलमा फस्दै गएको छ । यो क्षेत्रमा अस्थिरता बढ्दै गएको छ । मुलुकले शिक्षाको क्षेत्रमा ठोस नीति लिन र गन्तव्य पहिल्याउन सकिरहेको छैन । यी सबको कारक राजनीति नै हो । राजनीतिको आडमा गरिने व्यापारमा सधैं नै शंका रहिरहन्छ ।
किनकि ऐन बनाउने मानिस नै व्यापारमा संलग्न भएपछि त्यसमा पक्कै केही चलखेल गरेर उसले फाइदा लिन्छ नै । त्यसकारण, मुलुकमा सुझबुझपूर्ण र दूरदर्शी राजनेताको अभाव टड्कारो रूपमा खड्किएको छ ।राजनीतिको आडमा खुला अर्थतन्त्र तथा उदारीकरणलाई बदनाम गर्ने साहुजीहरूको पहिचान गरेर उनीहरूलाई यस क्षेत्रबाट बिदाइ नगरेसम्म डा. केसी फेरि–फेरि अनशन बसिरहनुपर्ने श्रृंखलाको अन्त्य हुने देखिन्न ।
तसर्थ नेपाल राष्ट्र बैंकले जसरी राजनीति गर्नेलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अलग्याउने नीति ल्यायो त्यसै गरी यस क्षेत्रमा पनि राजनीति तथा छद्मभेषी व्यापारीलाई नछुट्ट्याउने हो भने संविधानले परिकल्पना गरेको सबैका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्यको नारा मात्र नारामा सीमित रहनेछ ।
डा. गोविन्द केसी अर्थतन्त्र मेडिकल शिक्षा